उपभोक्ता नै शाओमीका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन् -सौरभ कोठारी, शाओमी नेपाल - Technology Khabar
» उपभोक्ता नै शाओमीका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन् -सौरभ कोठारी, शाओमी नेपाल
उपभोक्ता नै शाओमीका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन् -सौरभ कोठारी, शाओमी नेपाल
Technology Khabar १२ माघ २०७७, सोमबार
शाओमी स्मार्टफोन ब्राण्ड नेपाली बजारमा नम्बर वान ब्राण्डको रुपमा स्थापित हुन सफल भएको छ । शाओमीले आफ्नो प्रत्यक्ष उपस्थिती देखाएको छोटो अवधिमा नै नेपाली प्रयोगकर्ताहरुलाई आफ्नो डिभाइस र ब्राण्डप्रति निकै आकर्षित गर्न सफल भएको छ।
कम्पनीले नेपाली बजारमा एमआईका साथसाथै रेडमी र पोको ब्राण्डमा पनि विभिन्न संस्करणमा फोनहरु लन्च गरिरहेको छ । हालै पोकोलाई पुनजिर्वित गर्दै स्थानिय बजारमा पोको एक्स३ एनएफसी लन्च गरेको छ । जसले बजारमा निकै चर्चा पाएको छ भने केहि समयअघि शाओमी एमआई टिभी सिरिजसमेत सार्वजनिक भएका थिए ।
शाओमीलाई नेपाली बजारमा स्थापित गर्न र ससक्त ब्राण्डको रुपमा चिनाउन यी सबै कार्यहरुमा शाओमी टिमले निकै मिहिनेत गरिरहेको थियो र नेपालमा शाओमीका पहिलो कन्ट्री जनरल म्यानेजर सौरभ कोठारीले सो टिमका नेतृत्व लिएका थिए।
शाओमी नेपालको हालको बजारको समग्र अवस्था डिभाइसहरु, पोको ब्राण्डको पुनरागमन र आगामी योजनाहरुको बारेमा शाओमी नेपालका कन्ट्री जनरल म्यानेजर सौरभ कोठारीसँग हामीले कुराकानी गरेका छौं । कोठारीसँग गरिएको जस्ताको त्यस्तै-
नेपालमा शाओमीको हालको अवस्था कस्तो छ ?
हामी हाम्रो लाइनअप अझै बिस्तार गर्ने प्रक्रियामा छौं । अन्य विधा जस्तै चार्जर, राउटर, अडियो लगायत सार्वजनिक गर्ने योजनामा छौं । उपभोक्तालाई शाओमीका उत्कृष्ट उत्पादन छनौट गर्न पाउने मौका प्रदान गर्नेछौं।
पहिलो र तेस्रो त्रैमासिकमा नेपालको नम्बर वान स्मार्टफोन ब्रान्ड हुन सफल भएको छ। चौथो त्रैमासिकको विवरण आउन बाँकी छ । पक्कै पनि त्यसमा पनि पहिलै स्थानमा हुनेछौं । विषम परिस्थितिका बाबजुद पनि सन् २०२० मा शाओमी नेपालको नम्बर वान कम्पनी बन्न सफल भयो । गत वर्षको व्यापार कम्पनीका लागि उत्साजनकजनक रह्यो । चार महिनादेखि ५५ र ४३ इन्चको टिभी पनि बजारमा उपलब्ध गराइरहेका छौं । ५५ इन्च टिभीको सेग्मेन्टमा शाओमी सबैभन्दा धेरै बिक्री हुने टिभी बन्न सफल भएको छ । ४३ इन्च टिभीले पनि राम्रै गरिरहेको छ । हामी हाम्रो लाइनअप अझै बिस्तार गर्ने प्रक्रियामा छौं । अन्य विधा जस्तै चार्जर, राउटर, अडियो लगायत सार्वजनिक गर्ने योजनामा छौं । उपभोक्तालाई शाओमीका उत्कृष्ट उत्पादन छनौट गर्न पाउने मौका प्रदान गर्नेछौं।
उपभोक्ता नै शाओमीका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन् । उपभोक्ता मैत्री मूल्य दिन्छौं । अझै पनि शाओमीले नेपालमा धेरै काम गर्न बाँकी छ ।
शाओमी नेपालमा आएको धेरै समय भएको छैन । यति छिट्टै नम्बर वान ब्रान्ड बन्न शाओमीको प्रेरणा र गोप्य शुत्र के हो ?
शुरुमा नेपाल आउँदा हामीले शाओमी कसरी र किन बजारको अग्रणी ब्रान्ड बन्न सक्छ भन्ने कारण खोज्यौं । हामी एमआईका प्रशंसकलाई कसरी खुसी पार्न सकिन्न भन्ने अभियानमा लाग्यौं । एमआई प्रशंसकले नयाँ प्रोडक्ट चाहिरहेका छन् छिटो सार्वजनिक गर्न र उपयुक्त मूल्यमा । यसमा हामीले राम्रोसँग काम गर्यौ । सन् २०१९ मा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय लन्चको एक दुई हप्ता भित्रमा एमआई नेपालमा लन्च गर्न सुरु गर्यौ । सन् २०२० मा शाओमीका धेरै उत्पादन नेपालमा सार्वजनिक गर्यौ । यसले पनि उपभोक्ताले शाओमी नेपाल एक स्वतन्त्र कम्पनीको रुपमा लिनुभयो । त्यसका लागि हामी यहाँ छौं । मूल्य पनि ग्राहक मैत्री छन् । उत्तम मूल्यमा राम्रो उत्पादन दिने प्रयासमा छौं । हाम्रो कुनै पनि स्मार्टफोन बजारमा आउँदा त्यसको सक्सेसर समान मूल्यमा उत्कृष्ट फिचर र डिजाइनमा उपलब्ध गराउँदै आएका छौं । नोट५, नोट६, नोट७, नोट८ र नोट९ स्पेसिफिकेसनमा धेरै सुधार भएका छन् । तर मूल्य समान नै छ । हामी आफ्नो उत्पादनसँग नै प्रतिस्पर्धा गछौं । अघिल्लो जेनेरेसनको भन्दा पछिल्लो उत्पादनलाई उत्कृष्ट बनाउनु पर्छ भन्ने कम्पनीको लक्ष्य रहन्छ । यसले कम्पनीलाई मूल्य अनुकूलन बनाउन सहज हुन्छ।
अन्य प्रतिस्पर्धी कम्पनीको तुलनामा हाम्रो बजारीकरण बजेट शून्य नै छ भन्दा हुन्छ । यो कम्पनीको कूल बजेटको ५ प्रतिशत होला । हामी सोचविचार गरेर मात्र खर्च गछौं । उपभोक्ता नै शाओमीका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन् । उपभोक्ता मैत्री मूल्य दिन्छौं । अझै पनि शाओमीले नेपालमा धेरै काम गर्न बाँकी छ । शाओमीबाट २०२१ मा धेरै काम हुने छ जसबाट उपभोक्ता निश्चित पनि लाभान्वित हुनेछन् ।
हामी नेपालमा पोको ब्रान्डलाई पुनर्स्थापित गर्न चाहान्छौं । दुई वर्षअघि नेपालमा पोको सार्वजनिक भएको हो । अहिले हामी पोकोमा केन्द्रित भएर काम गरिरहेका छन् ।
शाओमी नेपालले तीन वटा ठूला ब्राण्डमा स्मार्टफोन बिक्री गरिरहेको छ । शाओमी, पोको र रेडमी । कम्पनीको प्राथमिकता कुन हो ?
शाओमी, पोको र रेडमी यी तीन छुट्टै ब्रान्ड हुन् । एमआई एक्सपेरिएन्स र फिल फोन हो भने रेडमी सन्तुलन र उत्कृष्ट स्पेसिफिकेसनमा छ र पोको गेमर फोन हो । तीन फरक प्रकार उपभोक्ताका लागि यी तीन प्रोडक्ट लाइनबाट सहयोग गर्न चहान्छौं । पोको एक्स सिरिज केहि समय अघि नेपालमा सार्वजनिक गरिएको छ। यसमा उपभोक्ताबाट सकारात्मक प्रतिक्रया पाईरहेका छौं। यी तीन फोन १५ हजार २० हजार र ३५ हजार भन्दा कम मूल्यका उत्कृष्ट फोन हुन्। ब्लगरहरुले पनि पोकोको तीन वटा फोनमा राम्रो प्रतिक्रिया दिएका छन् । हामी नेपालमा पोको ब्रान्डलाई पुनर्स्थापित गर्न चाहान्छौं । दुई वर्षअघि नेपालमा पोको सार्वजनिक भएको हो । अहिले हामी पोकोमा केन्द्रित भएर काम गरिरहेका छन् । उपभोक्तालाई उत्कृष्ट प्रोडक्ट र नेपालमा गेमिङ संस्कृती विकास हुने क्रममा छ । पोको फोनहरुमा बजेट मूल्यमा उत्कृष्ट गेमिङ अनुभव हासिल गर्न सकिन्छ।
अमेरिकी सरकारले गलत आरोप लगाएको हो । सत्यकुरा गर्दा यसको नेपालमा कुनै असर पर्ने छैन । शाओमी माथि नेपाली उपभोक्ताको विश्वास छ।
भर्खरै पोको एक्स थ्री लन्च गरिएको छ । यसको प्रतिक्रिया कस्तो छ ?
पोको एक्स थ्रीले उच्च ब्यापार गरिरहेको छ । ग्लोबल बजारको तुलनामा यहाँ हामीले केहि ढिला सार्वजनिक गरेका थियौं । एमआई उपभोक्ताको चहाना पूर्ति गर्न पोको सार्वजनिक गरिएको हो । एमआई उपभोक्ताले हामीसँग पोको किन बजारमा ल्याउँदैनौं भनेर बारम्बार प्रश्न गर्ने गरेका थिए । यहि मूल्यमा उत्कृष्ट क्यामरा, प्रोसेसर, डिस्प्ले, पोको एक्स थ्री बाहेक अन्य ब्रान्डमा पाउन सकिँदैन । केहि सिमित मुलुकमध्ये नेपाल एक हो, जहाँ पोको अफलाईनमा सार्वजनिक भयो । अन्तर्राष्टियरुपमा पोको अनलाईनमा मात्र सार्वजनिक हुनेगर्छ । नेपालीहरु मोबाइल पसलमै गएर किन्न रुचाउँछन् । उपभोक्ताको आवश्यकतालाई ध्यान दिएर अफलाइन सार्वजनिक गरिएको हो । यसले पोकोको बिक्रीमा सकारात्मक प्रभाव देखिएको छ ।
अमेरिकाले हालै शाओमीलाई पनि कालोसूचीमा राखेको छ । यसले नेपाली उपभोक्तालाई कस्तो प्रभाव पार्छ ?
पक्कै पनि यसले नेपाली उपभोक्तालाई असर गर्दैन । शाओमीले आधिकारीक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर चिनियाँ सैन्यशक्तिसँग कुनै प्रकारको सम्बन्ध नरहेको जानकारी गराईसकेको छ । अमेरिकी सरकारले गलत आरोप लगाएको हो । सत्यकुरा गर्दा यसको नेपालमा कुनै असर पर्ने छैन । शाओमी माथि नेपाली उपभोक्ताको विश्वास छ । शाओमीले उत्कृष्ट मूल्यमा राम्रो फोन उपलब्ध गराउँछ भन्नेमा उपभोक्ता आश्वस्त हुनुहुन्छ ।
हाम्रो पहिलो प्राथमिकता मोबाइल उपकरण नै हुन्छ । चार्जर, एयर फोन, एयर बड यी उपकरण स्मार्टफोनमा उपयोग हुन्छ । सन् २०२१ मा शाओमीको प्रोडक्टमा अझै धेरै विविधता देख्न सकिन्छ।
शाओमीले विविध प्रकारका प्रोडक्टहरु सार्वजनिक गरेको छ । एमआई टिभी, एसेसरिज, ग्याजेटमा भने कम्पनीले ग्लोबल मार्केटभन्दा नेपालमा ढिलो सार्वजनिक गरिरहेको छ । यस्तो किन गरिएको हो ?
हामी कुनै पनि प्रोडक्ट सार्वजनिक गर्नु अघि यो प्रोडक्ट नेपालका लागि उपयुक्त छ कि छैन भनेर अध्ययन अनुसन्धान गर्ने गर्छौं । नेपालमा टिभी सार्वजनिक गर्नु अघि हामीले ६ महिनादेखि यसमा काम गरिरहेका थियौं । अहिले पनि हामी केहि नयाँ उत्पादन नेपालमा ल्याउने तयारीमा छौं । ती पनि पक्कै पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भन्दा ढिलो आउनेछन । के यो सहि उपभोक्ताका लागि सहि उपकरण हो भनेर हेर्ने गर्दछौं। सकेसम्म उपभोक्तामैत्री मूल्यका उत्पादन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ । अहिलेको शाओमी पोर्टफोलियोमा उपयुक्त हुन्छ कि हुँदैन भन्ने हो । हाम्रो पहिलो प्राथमिकता मोबाइल उपकरण नै हुन्छ । चार्जर, एयर फोन, एयर बड यी उपकरण स्मार्टफोनमा उपयोग हुन्छ । बजारको आधारमा राउटर, अटोमेटिक सप डिस्पेन्सरमा पनि उपभोक्ताको राम्रै आकर्षण देखिएको छ । सन् २०२१ मा शाओमीको प्रोडक्टमा अझै धेरै विविधता देख्न सकिन्छ।
अनलाईन गेम खेल्न रुचाउनेका लागि पोकोका मोबाइल मूल्य तथा फिचर दुबैका हिसाबले उत्कृष्ट छ । परफरमेन्स र मूल्यमा पोको ब्रान्डसँग अन्य कम्पनीको प्रतिस्पर्धा नै छैन । नयाँ गेमरहरुलाई सर्पोट गर्ने योजना छ ।
शाओमीको बजार नेपालमा राम्रो देखिन्छ । बजारमा आफ्नो विरासतलाई कायम राख्ने कम्पनीको भावी योजना के छ ?
पक्कै पनि नम्बर वान हुनुभन्दा पनि नम्बर वान स्थान जोगाउनु चुनौतिपूर्ण हुन्छ । यसका लागि कम्पनीले इकोसिस्टममा नयाँ प्रोडक्ट जोड्दै लग्ने योजना बनाएको छ । हामीले सार्वजनिक गर्ने प्रोडक्टमा यी क्याटगरी सजिलै फिट होस् भन्नेतर्फ ध्यान दिइरहेका छौं । मूल्यका साथै कुन माध्यमबाट बिक्री गर्ने भन्ने पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । नेपालमा अफलाईन सार्वजनिक गर्नु पर्ने भएकाले बिक्री गर्ने माध्यम एकदमै महत्वपूर्ण हुन्छ । एयर प्यूरिफायर, ल्यापटप, ट्रिमर, सीसी क्यामरा, मोबाइल एउटै च्यानलबाट बिक्री गर्न सकिँदैन । हामीले सहि च्यानलबाट उपयुक्त उपकरण बिक्री गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि मात्र हामीले कुन प्रोडक्ट कसरी र कहाँ सार्वजनिक गर्ने भन्ने टुंगोमा पुग्न सक्छौं ।
पोकोलाई नेपालको शक्तिशाली ब्रान्ड बनाउने कुनै त्यस्तो योजना छ ?
पोको उपभोक्तामैत्री फोन हो । गेमिङका लागि पोको एक उत्कृष्ट विकल्प हो । अनलाईन गेम खेल्न रुचाउनेका लागि पोकोका मोबाइल मूल्य तथा फिचर दुबैका हिसाबले उत्कृष्ट छ । परफरमेन्स र मूल्यमा पोको ब्रान्डसँग अन्य कम्पनीको प्रतिस्पर्धा नै छैन । नयाँ गेमरहरुलाई सर्पोट गर्ने योजना छ । हाल पनि तीन जना गेमर यूट्युबरलाई सहयोग गरिरहेका छौं । उनीहरुलाई पोको एक्स थ्री दिएका छौं । नयाँ पोको गेमिङ फोन सार्वजनिक गर्ने तयारीमा छौं। हामीले बुझेका छौं नेपालमा गेमिङ बढ्दैछ । त्यसमा पनि पब्जी लोकप्रिय छ । यी तीन यूट्युबरले पोको एफ १ बाट आफ्नो यात्रा सुरु गरेका थिए ।
नेपालमा गेमिङ च्याम्पियन सिप गर्ने कुनै योजना छ ?
गत वर्ष पब्जी च्याम्पियनसिप नेपाल आयोजना गरेका थियौं। यो नेपालको सबैभन्दा ठूलो मोबाइल गेम च्याम्पियनसिप थियो । त्यसमा ३२ वटा टिमले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । त्यसपछि पनि अझै यस्तो टुर्नामेन्ट गर्ने योजनामा थियौं । तर कोभिड–१९ का कारण सम्भव भएन । गेमर र गेमिङ समाजलाई सहयोग गर्न हामी सधैं तत्पर रहनेछौं । पोकोको माध्यमबाट गेमिङ समाजलाई बढाउन निश्चित पनि सहयोग रहनेछ।
प्रकाशित: १२ माघ २०७७, सोमबार
स्मार्ट ट्र्याकिङ्ग डिभाइस ‘ग्यालेक्सी स्मार्ट ट्याग’ मा काम गर्दै सामसङ, एप्पललाई चुनौती हुने
फोन पेको ग्यापुसँग फ्ल्यास सेल, खसि किन्दा गज्जबको रिवार्ड प्वाइन्ट घटाउन पाईने
सामसुंगको नोट सिक्स वाटर एण्ड डस्ट रेसिस्ट्यान्ट हुने, ६ जीबी र्याम तथा ५.८ इन्चको डिस्प्ले